February 27, 2018 - TV Annapurna
नेपालले युएईलाई ५ विकेटले हरायो
February 27, 2018 Annapurna TV
आइसीसी विश्वकप छनोटको तयारीमा रहेको नेपाली क्रिकेट टोलीले पहिलो अभ्यास खेलमा युएईलाई ५ विकेटले हराएको छ । १ सय ७२ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले सो लक्ष्य २८ ओभर २ बलमा ओभरमा पुरा गर्न सफल रह्यो । नेपालका लागि आज ब्याटिङमा नायक शरद भेषावकर र दिपेन्द्र सिंह ऐरी रहे । दिपेन्द्रले ३२ बलमा ४१ रन जोडे भने शरद ४० रनमा अवजित रहे । नेपालको टप-अर्डर आज पनि क्रिजमा धेरैबेर जम्न सकेन । उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल १२ रनमा आउट भए भने दिलिप नाथले ४ रनको योग्दान दिए । त्यस्तै कप्तान पारस खड्काले…
February 27, 2018 February 28, 2018 Annapurna TV
अनिल पोखरेल ,सप्तरी राजविराजको स्थापना काल देखिनै नगरको बिच भागमा रहेका ५८ वर्षको इतिहास बोकेकोे राजविराज जगदुरी हटियाका ब्यापारीलाई व्यवसाय गरीरहेको ठाउँको ग्यारेन्टि गर्न नसक्दा जगदुरी हाट व्यवस्थित गर्ने करोडौंको सरकारी योजना असफलतातर्फ धकेलने भएको छ । वडा नम्बर ७ स्थित हटियाको पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै गत माघ २० गते नगरपालिकाले सूचना जारी गरेदेखि नै व्यापारीहरु आन्दोलित छन् । विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि नारा–जुलुस गर्ने तथा बजार–पसल बन्द गर्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ । करिब १ महिनादेखि व्यापार-व्यवसाय प्रभावित छ । मंगलबार पनि व्यापारीहरुले जुलुससहित नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘हटिया पुनर्निर्माण योजना’…
मोहनविक्रम सिंह ने.क.पा. (मसाल)को छैठौँ भेला हालै सम्पन्न भएको छ । त्यो भेलाको छलफल खालि दुईवटा एजेण्डाहरूमा मात्र सीमित रहेको थियो । प्रथम, हालै सम्पन्न चुनावको समीक्षा । द्वितीय, पार्टी अनुशासनको मूल्याङ्कन । ती दुवै विषयहरूमा भेलामा विस्तृत रूपले छलफल भयो । भेलाले हामीलाई दुईवटा जिम्मेवारीहरू दिएको छ ः प्रथम, शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गर्ने । द्वितीय, आठौँ महाधिवेशन सफल पार्ने । आगामी करिब एक वर्षका बीचमा हामीहरू ती जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न एकताबद्ध भएर लाग्नु पर्दछ । अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्नु अत्यन्त कठिन कार्य…
February 27, 2018 February 27, 2018 Annapurna TV
केही महिना अघिसम्म नेकपा एमाले मधेस विरोधी दल भनेर स्वयं मधेसी दलहरुले भन्ने गरेको र निर्वाचनअघि संशोधनको विपक्षमा रहेको एमाले दुई–तिहाई मत सहितको सरकार बनाउन संशोधनको लागि तयार भएको छ । सोमबार फोरम अध्यक्ष यादवसँग भएको छलफलपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित प्रधानमन्त्री ओली संशोधनको विषयमा राजनीतिक सहमति गर्न तयार देखिएका हुन् । संविधान संशोधन भए सरकारमा सहभागी हुने संकेत फोरम अध्यक्ष यादवले दिएपछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी लम्बिएको हो । माओवादी केन्द्रका ७ र एमालेका ८ मन्त्रीलाई एकसाथ शपथ खुवाउने भनिए पनि फोरमसहित सरकारलाई पूर्णता दिन सबैलाई शपथ खुवाउने कार्यक्रम सरेको…
नेपालको कमजोर सुरुवात, तेस्रो विकेट पनि गयो
विश्वकप क्रिकेटको छनोट खेल्न जिम्बाबे पुगेका नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्सले पहिलो अभ्यास खेल खेलिरहेका छन । पहिलो अभ्यास खेलमा १ सय ७२ रनको लक्ष्य सहित जबाफी ब्याटिङमा उत्रेको नेपालको तेस्रो विकेट गएको छ । पहिलो विकेटको रुपमा नेपालका ओपनर ब्याट्सम्यान दिलिप नाथ ४ रन बनाएर आउट भए भने दोस्रो विकेट अर्का ओपनर ज्ञानेन्द्र मल्ल १२ रन बनाएर आउट भए । नेपालको तेस्रो विकेटको रुपमा अनिल शाह ११ रनमा आउट भए । अहिले क्रिजमा कप्तान पारश खडका शरद भेषावकर खेलिरहेका छन । ताजा अवस्थामा नेपाल ८ ओभरमा ३९ रन बनाएर…
श्रीदेविको शव परिवारलाई हस्तानतरण, दुबई प्रहरीद्धारा मृत्युको केस बन्द
दुबई प्रहरीले बलिवूडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवी कपूरको शव उनको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्दै उनको मृत्युको केस बन्द गरेको छ। प्रहरीका अनुसार गत शनिवार ५४ वर्षीया श्रीदेवीको मृत्यु ’अचेत भएपछि दुर्घटनावश डुबेर’ भएको थियो। उनलाई दुबईस्थित आफू बसेको एउटा होटलको बाथटबमा भेटिएको थियो। यसअघि उनको मृत्युको कारण ’कार्डिएक अरेस्ट’ अर्थात् ’मुटुको चाल बन्द हुनु’ भएको बताइएको थियो। सुरक्षित राख्ने आवश्यक उपाय गरेपछि उनको शवलाई अन्तिम संस्कारका लागि भारत लगिने छ। अन्त्येष्टिपूर्व उनलाई श्रद्धाञ्जली दिन मानिसहरू श्रीदेवीको मुम्बईस्थित घरबाहिर भेला भएका छन्। आफन्तको वैवाहिक कार्यक्रममा भाग लिन उनी सपरिवार दुबई गएकी थिइन्। शवपरीक्षणको…
युएईले नेपाललाई दियो १७२ रनको लक्ष्य
आइसिसी विश्वकप छनोट क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालले १७२ रनको विजयी लक्ष्य पाएको छ। जिम्बावेको क्वे क्वे स्पोर्टस् क्लबको खेल मैदानमा टस जितेर व्याटिङ गरेको युएईले २८.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १७१ रन बनायो। युएईका लागि असफाक अहमदले सर्वा्धिक ४२ रन बनाए। अदनान मुफ्ती ३७, घुलाम साब्बर ३२, मोहम्मद उसमान २६ र साइमन अनवरले १६ रन जोडे। नेपालका ललितसिंह भण्डारीले सर्वा्धिक ४ विकेट लिए। करण केसी र ललितनारायण राजवंशीले समान २–२ विकेट लिए। कप्तान पारस खड्काले एक विकेट लिए। वर्षाका कारण निर्धारित समयमा सुरु हुन नसकेको खेललाई २९ ओभरमा…
दुई सय नतिरी फरार वृद्ध ३३ वर्षपछि समातिए
नुवाकोट प्रहरीले एकजना अभियुक्तलाई फरार भएको ३३ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। कुटपिट मुद्धामा नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट २०४१ साल भदौ २८ गते दुई सय रुपैयाँ जरिवना फैसला गरेलगत्तै नुवाकोटको पूर्वी भेगमा रहेको थानापतिका सुन्दर मिजारलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई जरिवाना असुलका लागि नुवाकोट जिल्ला अदालतमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। माघ महिनादेखि विभिन्न मुद्दामा फरार अभियुक्तलाई फक्राउ गर्ने अभियानमा नुवाकोट प्रहरीले झण्डै डेढ सय फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ । यसैगरी, बहु विवाह मुद्धामा गत २०७२ साल माघ २५ गते २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ११ महिना…
नया सरकार आएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका चार सदस्यले दिए राजीनामा
केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा आएसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगका चार जना सदस्यले राजीनामा दिएका छन् । आयोगका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद गौतमका अनुसार आयोगका सदस्यहरू डा. प्रभु बुढाथोकी, अरविन्द मिश्र, कृपासिन्धु प्रसाद र गोविन्द भट्टले राजीनामा बुझाएका हुन् । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले राजीनामा स्वीकृत गरेपछि त्यसको पत्र सोमबार आयोगमा प्राप्त भइसकेको प्रवक्ता गौतमले बताए । आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वणिर्म वाग्लेले गत ६ फागुनमै राजीनामा दिइसकेका थिए ।
कुवेतमा एक महिला १ वर्षदेखि फ्रिजरमा
प्रहरीले घरायसी काम गर्ने १ जना फिलिपिनो महिलालाई एउटा फ्रिजरमा मृत अवस्थामा फेला पारेको घटनाको सिलसिलामा कुबेतस्थित उनका मालिकलाई गिरफ्तार गरेको छ। २९ वर्षीया जोन्ना डेमाफेलिस नामक ती महिला हराएको उजुरी गरिएको १ वर्षभन्दा लामो समयपछि उनकै मालिकको अपार्टमेन्टको फ्रिजरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्। हप्तौंदेखि फरार रहेका नादेर एस्साम अस्साफ नामक ती मालिकलाई हत्याको आशंकामा लेबनानमा गिरफ्तार गरिएको फिलिपिन्सको विदेश मामिला विभागले शुक्रबार जनाएको छ। डेमाफेलिसको शंकास्पद मृत्युको कारण फिलिपिन्समा व्यापक विरोध र आक्राशको लहर फैलिएको छ। साथै कामको सिलसिलामा फिलिपिनोहरूलाई कुबेत जान रोक लगाउनुपर्ने माग बढ्न थालेको छ। फिलिपिनी…